एसएसपी खरेलको शंकास्पद सम्वन्ध ! | abc.com.np
एसएसपी खरेलको सम्वन्ध भएका ती ब्यक्ति अरु कोही नभएर राई स्कुलका प्रिन्सिपल कृतिराज पाण्डे हुन् । बेलाबेलामा विद्यार्थीलाई भारतीय राष्ट्रिय गित गाउन लगाएका कारण विवादमा परिरहने स्कुलका प्रिन्सिपल पाण्डेको प्रायजसो प्रहरीका बरिष्ठ अधिकृतहरुसँग राम्रो उठवस छ । प्रहरीका बरिष्ठ अधिकृतहरुसँग राम्रो सम्वन्ध बनाई सूचना बेच्ने काम गर्दै आएको पाण्डेमाथि आरोप छ । स्रोतका अनुसार नेपालस्थित भारतीय एम्वेसीसँग पाण्डेको राम्रो सम्वन्ध छ । सोही कारण प्रहरीका हाकिमहरुले सरुवा र बढुवा गर्नु परेमा पाण्डेलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । पाण्डेलाई नजिकबाट चिन्नेहरु उनी भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ को अण्डरकभर एजेन्ट भएको बताउँछन् । स्रोत भन्छ,‘पाण्डेको प्रायजसो गुण्डाहरुसँग एकदमै राम्रो सम्वन्ध रहेको छ । एसएसपी खरेलले राजधानीमा गुण्डा अपरेशन चलाउँदा केही ब्यक्तिलाई पाण्डेको आग्रहमा रातारात छाडिएको थियो ।’ जबकी एसएसपी खरेलले अन्यलाई गुण्डागर्दी गरेको आरोपमा सयौंलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाई २४ दिनसम्म थुनेका थिए । तिनै पाण्डेसँग एसएसपी खरेलको घनिष्ठ सम्वन्ध रहेको छ । स्रोतका अनुसार पाण्डेलाई भेट्न जाँदा एसएसपी खरेल आफ्नो गाडिबाट ओर्लिएर गाडि बाटोमा पार्किङगरि मास्क लगाएर पैदल जाने गरेका छन् ।
त्यसो त विरगञ्जमा रहँदा खरेलले राजश्व छलि गरि बरामद भएका समान पक्राउ गर्दा सुराकीमा आफ्नै पत्नी, भाईभतिजा र सालाको नाम राखेर राजश्वबाट लाखौं रुपैयाँ बुझेको थिए । सुराकी नै नभएका मान्छेलाई नाम राखेर रकम बुझ्नु कत्तिको जायज मानिन्छ ? राजधानीमा रेडिमेड कपडाको ब्यवसाय गर्ने रञ्जु खरेल तत्तकालिन समयमा विरगञ्जमा रहका खरेलको सुराकी कसरी बनिन ? त्यसमाथि पनि खरेलले चोरीका गाडि समात्नेदेखि भन्सार छलि आएका सामान पक्राउ गर्दा समेत आफ्नै श्रीमती रञ्जुको नाम सुराकीमा राखेका थिए । राजश्व छलि गरि ल्याइएका सामान पक्राउ गर्न सुराकी गर्ने जो कोहीले सुराकीबापत ३५ प्रतिशतसम्म कमिशन राज्यले दिने गर्छ । नियमित चेक जाँचका क्रममा बरामद भएका सामानलाई पनि खरेलले विरगञ्जमा रहँदा सुराकीमा आफन्तको नाम राखेर सुराकी बापत आउने रकम आफै लिएका थिए ।